Accueil > Gazetin'ny nosy > SeFaFi: Tokony tsy hifidy ny mpitondra tsy nahomby intsony
SeFaFi: Tokony tsy hifidy ny mpitondra tsy nahomby intsony
Namory mpanao gazety ny SeFaFi na ny Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena omaly zoma faha 03 Martsa 2018 tetsy amin’ny toeram-pisakafoanana Tamboho tetsy Ambodivona. Toa ny fanaony dia manambara ny heviny amin’ny fandehan’ny raharaham-pirenena ankehitriny ity fiaraha-monim-pirenena ity. Araka ny mahazatra koa dia mamoaka boky ho fanampiana ny Malagasy amin’ny fanoroana làlana azy amin’ny zavatra izay heveriny fa ilaina amin’ny fiainana izy ireo.
Eo ankatokia ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ity taona 2018 ity izao dia nanambara ny SeFaFi fa tokony hiroso amin’ny antsoina hoe «vote sanction » na «ny tsy fifidianana intsony mpitondra tsy nahomby ». Tao anatin’ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety no nilazan-dramatoa Rabenarivo Sahondra izay manam-pahaizana manokana momba ny lalàna sy ny fandinihana ny fiaraha-monina izany. Tsy ho an’ny filoham-pirenena ihany no nilazany izany tolo-kevitra izany fa ho an’ny olom-boafidy rehetra. Ny mpandaha-teny iray antsoina hoe Rakotoniaina Annie, dia nitondra fanazavana koa mahakasika ny tokony hamerana ny vola hanaovana fampielezan-kevitra ho an’ny mpifaninana. Tokony hitovy avokoa ny vola entin’ny mpifaninana rehetra hoy ireto mpikambana amin’ny SeFaFi ireto. Ny antony, hoy ihany ireto mpikambana ao amin’ity sehatra ity, dia noho io vola zaraina io no mahatonga ny risoriso sy ny kolikoly izay mahazo vahana amin’izao fotoana izao. Ny vola no fomba amitahana ny mpifidy ka anjonoana azy noho ny fahantrana izay mihoa-pampana ankehitriny. Noho izany dia tsy maintsy mieritreritra ny hamerenana ny vola laniny ireo mpilatsaka hofidina ireo rehefa tonga eo amin’ny fitondrana. Raha manaja ny soatoavina sy ny fenitra ary ny fifampifehezana pôlitika (éthique et déontologie) ny mpana pôlitika Malagasy dia tsy tokony ny vola na ny akanjo na koa ny zavatra materialy hamitahana ny vahoaka no ho entina arangaranga amin’ny fisintonana azy ireny, ka hozaraina amin’ny mpifidy. Isan’ny olana lehibe tokony ho vahana izany, hoy ihany ireto mpikambana ao amin’ny SeFaFi ireto satria izany no mahavoafitaka ny Malagasy hatramin’izao.
Mahakasika ny fiainana pôlitika sy ny zavatra iainan’ny Malagasy ankehitriny dia namoaka boky mitondra ny lohan-teny hoe : «Mbola manantena ihany na dia tsy misy antenaina aza » ny SeFaFi. Izany no ilazan’izy ireo ny fitondrana sy ny fiaraha-monina ankehitriny. Raha nanontaniana ny mahakasika io lohateny io izy ireo dia nanambara fa tsy misy zavatra azo antenaina intsony ataon’ny mpitondra saingy mbola eo ny vahoaka ka mbola manantena ihany. Izany no antony ilazan’izy ireo fa tokony hatao io “vote sanction” io.
Rehefa tonga amin’ity “vote sanction” ity ny Malagasy dia azo lazaina fa tena efa misy fivoarana lehibe ary anatra ho an’ny mpanao pôlitika koa izany.
Tsy ny fitondrana ankehitriny izay misy an’ingahy Hery Rajaonarimampianina sy ny depiote ary ny ben’ny tanàna ihany no tokony hanaovana ity “vote sanction” ity, fa ireo izay efa nitondra rehetra teto amin’ny firenena ka tsy nahomby ny fitondrany. Tsy afa-miala amin’izany ingahy Andry Nirina Rajoelina izay nitondra tamin’ny tetezamita. Nametrahan’ny vahoaka Malagasy ny fahatokisana be dia be mba hialana tamin’ny fanjakana tsy nahomby izay nentin’ingahy Ravalomanana Marc ny tenany, nefa dia vao mainka nampidi-kizo ny Malagasy sy ny firenena ka isan’ny fototra ny zava-misy iainana amin’izao fotoana izao.
Misarika ny sain’ny Malagasy rehetra ny SeFaFi mba hahay handinika tsara amin’ny fifidianana ho avy io ka hahay hanavaka tsara ny olona handroba sy hangalatra eto amin’ny firenena mba tsy hifidy azy ireny intsony. Na ho an’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena izany na ny amin’ny sehatra hafa rehetra koa.
Hery Rajaonarimampianina: Namaly faty ny depiote tamin’ny alalan’ny lalàmpifidiana
Tamin’ny taona 2015 volana jona nandritra ny fivoriana ara-dalàna nataon’ny Antenimieram-
pirenena dia naongan’ny depiote tamin’ny alalan’ny fampiatoana amin’ny asany (décheance), ny filohan’ny repoblika Hery Rjaonarimampianina. Raha tsy nisy ny Fahefana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), izay namadika ny raharaha ho “fifanarahan’ny fandraisana andraikitra” na ny “Pacte de responsabilité” izay tsy ao anatin’ny lalàna akory, dia efa niala tamin’ny toerany ingahy Hery Rajaonarimampianina.
Tsy nanana solombavambahoaka voafidy tamin’ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) ingahy Hery Rajaonarimampianina na iray aza fa olona voavidy sy voatery nivadika HVM noho ny tahotra sy ny noho ny fiarovana ny tombotsoany manokana no nanampy ny filoham-pirenena amin’izany fahabangana izany.
Raha ny depiote nivadika palitao tamin’io fotoana io dia ireo izay avy amin’ny fikambanana tsotra na tsy miankina no isan’ny nihazakazaka tany amin’ny HVM. Nisy indray no nivadika avy amin’ny antoko pôlitika satria natahotra ny antsojay nanaovan’ny fanjakana azy toa ny depiote iray avy any Manakara.
Koa satria nangelingelina ny fitondrana Hery Rajaonarimamianina ny fisian’ny fahabetsahan’ny fikambanana tsy miankina izay be indrindra ao amin’ny Antenimierampirenena amin’izao fotoana izao dia natao izay hanasarotana ny filatsahan’izy ireny amin’ny fifidianana manaraka. Tsy maintsy misy miantoka olona 10 avy amin’ny olom-boafidy, dia ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny solombavambahoaka raha hilatsaka ho fidiana. Tsy maintsy manana mpiantoka 150 avy amin’ny olom-boafidy avy amin’ny faritra telo raha kely indrindra ny filoham-pirenena.
Midika izao fa nihemotra ny fahalalahana eto Madagasikara sy ny demôkrasia. Nihemotra ihany koa ny firenena noho izany ary mazava fa endrika ny didy jadona izany.
Mbola olana koa ny mahakasika ny andininy milaza fa raha toa ka depiote roa no fidiana amin’ny fari-piadidiam-pifidianana iray dia zaraina roa izany ka ny iray hatao eo andrenivohitra ny fari-piadidiana ary ny iray homena ny any ambanivohitra. Tsy hisy intsony izany ny antoko iray mahazo poa-droa raha toa ka tian’ny olona ny antoko misy azy.
Aza adinoana fa ingahy Hery Rajaonarimampianina raha nilatsaka hofidiana tamin’ny taona 2013 dia tsy tao anatin’ny antoko pôlitika velively fa fikambanana tsotra tsy miankina antsoina hoe “Hery vaovao ho an’i Madagasikara” no nentiny tamin’izany. Rehefa lasa filoham-pirenena izy vao navadika antoko ity fikambanana tsotra ity.
Ankehitriny dia nohasarotiny ny filatsahan’ny mpikambana eo anivon’ny fikambanana tsotra tsy antoko pôlitika hilatsaka hofidiana.
Ny tantara nolazaina tary aloha dia milaza fa valifaty tsotra izao no dikan’izao ho an’ireo depiote izay nanongana azy ka tsy nahatontosa izany. Tsy maintsy hifidy io lalàna io toa ireo rehetra mandalo eo anatrehany hatramin’izay ireo depiote efa lasa voavidim-bola ankehitriny. Na koa hifidifidy foana noho ny tsy fandinihana ny tolo-dalàna atolotra azy ireo toa ny nitranga tamin’ny “cybercriminalité”, ny lalàna ny serasera sy ny maro hafa koa. Misy fotoana aza dia depiote 19 no mandany lalàna ao